श्रीमतीसँग नजिकिएको आरोपमा सैनिकले गरे सैनिककै हत्या – YesKathmandu.com
श्रीमतीसँग नजिकिएको आरोपमा सैनिकले गरे सैनिककै हत्या
शनिबार ३०, फागुन २०७१
काठमाडौं । नेपाली सेनाको श्रीनाथ गणमा कार्यरत रुद्रबहादुर थापाले सहकर्मी रोहित कुमार ओझाको हत्या गरेका छन्। आफ्नी श्रीमतीसँग नजिकिएको भन्दै थापाले नेपाली सेना मै कार्यरत ओझाको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । १५ फागुनमा सेनाको आर्टिलरी गणबाट अस्पताल जान्छु भन्दै हिँडेका ओझा सम्पर्कमा नआएपछि परिवारको उजुरीका आधारमा प्रहरीले खोजी गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा ओझाको मोबाइल सम्पर्क थापासँग धेरै पटक भएको देखिएकाले प्रहरीले थापाको पनि खोजी गरेको थियो। संयोगले उनीपनि त्यहि दिनबाट कार्यलयमा हाजिर भएका थिएनन्। प्रहरीले उनलाई रुपन्देहीको देवदहको एक होटलबाट बिहिबार प्रक्राउ गरेपछि ओझाको हत्या भएको खुलसा भएको हो।
थापाको बयान अनुसार २०६६ सालमा सिराहामा उनकी श्रीमती आस्था मगर र ओझाको चिनजान भएको थियो। त्यसपछि उनीहरुको मोबाइलमा कुराकानी हुन्थ्यो। केही समयपछि थापाले नेपालटारमा कोठा भाडामा लिइ श्रीमतीलाई राखेर विदेशी मिशनमा गएका थिए।
फर्केर आउँदा पनि ओझा र श्रीमतीको सम्बन्ध रहेको थाहा पाएर श्रीमतीसँग सोधपुछ गरेका थिए। त्यसपछि ओझाले थापाकै सामुन्ने भद्रकाली मन्दिरमा मगरलाई बहिनी मानेर टिका लगाएका थिए। बहिनी मानेपनि उनको कोठामा आउजाउ गरिरहन्थे।
फागुन १५ गते अल्का अस्पताल जान्छु भनी हिँडेका ओझाले थापालाई नारायणस्थानमा भेटन बोलाए। दुईजनाबीच कुराकानीका क्रममा विवाद भएपछि थापाले ओझालाई छालाको बेल्टले प्रहार गरे। अचेत बनेपछि केही तल गुल्टाइदिए। ओझाकै मोबाइलबाट श्रीमतीलाई फोन गरेर ओझालाई मारिदिएको बताए। त्यस रात उनी कोठामा आएर बसे। अर्को दिन व्यारेकमा गए। तेस्रो दिन फेरि घटना स्थलमा गई ओझाको लासलाई चक्कुले खाल्डो खनेर गाडी दिए।
थापालाई प्रहरी कर्तव्य ज्यान मुद्धा चलाउने भएको छ।
जुन देशको आकाश नै आफ्नो छैन
फेरी अर्की ६ बर्षीय बालिका बलात्कृत, स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर
अयोधीको आक्रोश : ‘बीस वर्ष चुनाव नहुँदा चुप लाग्ने अहिले दश दिन कुर्न सँकिदैन यार ?
चुडामणि शर्माको निवेदनमाथिको सुनुवाई सकियो,शुक्रबार निर्णय आउने
आन्दोलनमा उत्रने भनी नयाँ शक्ति पार्टीले दियो चेतावनी
सिमानाकामा भएको अवरोध हट्यो
एक सिट लिएर ‘नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल’ संसद प्रवेश
इन्काउन्टरको संकेत पाएपछि घैटे २१ दिनअघि आयोग पुगेका थिए
एकाबिहानै काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर र उपमेयर हरिप्रभा झाडु लिएर सडकमा निस्किएपछि
एमालेले तोक्यो सात प्रदेशमा सात संयोजक (कुन प्रदेशमा को बने प्रमुख ?)
सिपी मैनाली दम्पत्ती नै समानुपातिक सूचीमा
चिकित्सककै लगानीमा स्वास्थ्य शिविर
मोर्चाद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई पाँचबुँदे ज्ञापनपत्र
दुई महिनापछि गोलाप्रथाद्धरा ट्याक्सी नम्बर उपलब्ध गराइने
अनेरास्ववियुको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै नवीना,को आउला नयाँ नेतृत्वमा ?
भद्रपुरमा आजदेखी विमानलाई इन्धन भर्ने सुविधा